Mindmapping 101: Mabaadii'da Maskaxda | Martech Zone
Waxaan dhawaan isku qornay nooca internetka ee Mindjet, macmiilkayaga iyo kafaala-qaadaha tiknoolajiyada ee Martech. Waxay leeyihiin a 25% off qaaska ah soconaya dhamaadka usbuuca! Aad ayaan ugu cusbahay fikirka maskaxda waxaanan la kulmay khariidad maskaxeed cajiib ah oo la wadaagay Khariidado loogu talagalay Taas oo muujineysa mabaadi'da 'Mindmapping'.
Waxa aan ugu mahadnaqo fikirka maskaxdayda ayaa ah inaan si dhakhso leh u abaabuli karo fikirradayda qaab jaranjaro ah illaa heer faahfaahin dhammaystiran. Khariidad-maskaxeedkani wuxuu dhex marayaa sababta ay dadku u adeegsadaan fikradaha maskaxda iyo sida ay faa'iido ugu leeyihiin maskaxda bidix iyo midig labadaba, sida loo bilaabo sameynta naqshadaynta maskaxdaada iyo sida looga faa'iideysto dhammaan qalabka lagu kala saarayo mid kasta oo ka mid ah laamaha, mowduucyada, mawduucyada hoose iyo ficillada. Mindjet xitaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad iskuxirto laamaha, ku darto shaqooyin, iyo sidoo kale inaad la wadaagto oo aad la shaqeyso xubnaha kooxda.
Inta aan ku jirno dadaalkeena suuq-geynta, waan ka faa'iideysanay khariidado maskaxeed, Soo bandhig cilmi baaris muhiim ah, ololeyn qorsheyn ah, soo saar astaamaha softiweerka, iyo diiwaangelinta sida ganacsigeennu u shaqeeyo guud ahaan. Waa wax farsamo ahaan la qabatimay - waqti badbaadin iyo sameynta khariidado si cad oo nadiif ah u sharaxaya qorshooyinkaaga ama howlahaaga.
Waa kuwan fiidiyow bilow ah oo deg deg ah oo ku saabsan sida dadku u adeegsanayaan Mindjet si ay u horumariyaan khariidadaha maskaxda:
Tags: sida loo kharijiyoMindjetkhariidadda maskaxdafekerkamabaadi'da fikirka